राजपाको द्विविधा र संविधान संशोधन- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं — सरकारले प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन असोज २ गते गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा निर्वाचन बिथोल्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेकै कारणले राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) ले चुनावमा भाग लिएको थिएन ।
तर पनि राजपाका केही कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिए भने केहीले बहिस्कार गरे । नतिजा के आयो भन्नेतिर नजाऔं ।
चुनावका क्रममा संसफो आफै फँस्दै गएको देखिन्छ । मनोनयन हुनुभन्दा एकदिन पहिलाको उसको अभिव्यक्ति र मनोनयन दर्तापछिको अभिव्यक्तिमा धेरै भिन्नता देखियो । संविधान संशोधनबिना कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा भाग नलिने आफ्नै वचनबद्धता विरुद्ध लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकार गरेको भन्दै निर्वाचनमा भाग लियो । स्मरण रहोस्, संसफोका अध्यक्षले संविधान संशोधनले हुँदैन, संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने भन्दै आएका थिए । सधैँ फूलमालाले स्वागत हुने नेताको चुनावमा सहभागी भएकै कारणले मधेसी जनताले बहिस्कार गरेको कुरा सर्लाहीको घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ । अब फेरि हामीले आन्दोलन छाडेका छैनौं भन्ने अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ ।
न्याय पाउने अन्तिम ढोका हो– न्यायालय । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बोल्न पाइँदैन । राजनीतिक विषय भएकाले मात्रै यहाँ छलफल गरिएको हो । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न आयोग बनेको थियो । स्थानीय जनतासँग छलफल, परामर्शबिना नै काठमाडौंको होटलमा बसी प्रदेश नं. २ र ५ का ११ वटा जिल्लाको स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरियो । संविधान र कार्यनिर्देशको विपरीत हुनेगरी मधेसी बाहुल्य जिल्लामा गैरकानुनी तरिकाले स्थानीय तहको सिमाना कोरियो । त्यही मुद्दा लिएर सर्लाही, सिसौटियाका केही व्यक्ति अदालत पुगे । २ पटक मुद्दा दरपीठ भयो । इजलासको आदेशमा दर्ता भयो, विचाराधीन अवस्थामा छ, निर्वाचन भएकाले त्यो अब विचाराधीन मात्र भयो । मधेसी जनताको मागस्वरुप स्थानीय तहको संख्या बढाउन समिति बन्यो । त्यसले तराई मधेसका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्‍यो । फेरि मुद्दा पर्‍यो, सोही धारालाई टेकेर अदालतले अन्तरिम आदेश गर्‍यो । सरकारको निर्णय यथास्थितिमै छ । यसरी संविधानको एउटै धारा टेकेर गएकोमा केही सुनुवाइ भएन ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७४ ०८:३०